Kismaayo News » Axmed Madoobe oo dagaal iclaamiyay
Axmed Madoobe oo dagaal iclaamiyay
Kn: Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta asagoo dirayska ciidanka ku labisan gaaray saldhigga ay ciidamada daraawiishta Jubbaland ku leeyihiin Buulo-guduud ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka Alshabaab ee gacanta ku haya gobolka Jubbada Dhexe iyo degmooyinka Jamaame iyo Xagar.
Axmed Madoobe oo ciidanka la hadlayay ayaa sheegay in la soo dhameeyay diyaar garawgii loogu jiray in guluf dagaal lagu bixiyo deegaamada ay haystaan Shabaabku, hadeerna la joogo xiligii horay loo socon lahaa ee la xorayn lahaa deegaamada maqan. Axmed wuxuu intaasi ku daray in uu ciidamada dhex joogi doono si uu ula qaybsado diihaalka iyo rafaadka ay u marayaan inay Shabaabka kaga sifeeyaan deegaamada ay wali gacanta ku hayaan.
Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu ciidamada u geeyay dhaqaale mooraal dhisid ah oo lagu dhiiri galinayo ciidamada ku sugan difaaca hore oo saldhigoodu yahay Buula-guduud.
Ciidamada daraawiishta Jubbaland oo kaashanaya sirdoonka iyo nabadsugidda Jubbaland ayaa baryihii danbe maleeshiyaadka Alshabaab ula diriraayay nidaamka jabhadaynta ee kooxo kooxo buraashadda biyaha loogu dhaansanaayo duurka. Xeeladan oo Shabaabku isticmaali jireen ayay ciidamada daraawiishta Jubbaland markay u isticmaaleen Shabaabka ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh. Waxaa u danbaysay shalay markii ay deegaamada Wirkooy iyo Baar-sanguuni ay ku kala cayriyeen maleeshiyaad Shabaab ah oo halkaasi isku uruursanayay.